तपाईको पहिलो काम खोजी? Useful उपयोगी सुझावहरू तपाईले पालना गर्नु पर्छ - व्यक्तिगत विकास क्याफे
तपाईको पहिलो काम खोजी?4उपयोगी सल्लाहहरू तपाईंले अनुसरण गर्नुपर्छ
पोस्ट Judy | फरवरी 27, 2018 | जागीरको खोजि, क्यारियर सल्लाह किशोरका लागि |0|
1 तपाईंको पहिलो काम खोज टिप # 1 - प्यानिक छैन!
2 तपाईंको पहिलो काम खोजी सल्लाह #2- एक पेशेवर CV / पुन: शुरू सिर्जना गर्नुहोस्
3 तपाईंको पहिलो रोजगारी खोजी टिप #3- रोजगार अन्तर्वार्ताको लागि तयार गर्नुहोस्
4 तपाईंको पहिलो काम खोज टिप #4- फिडब्याक पाउनुहोस्!
तपाईको पहिलो काम खोजी? तपाई कहाँबाट सुरू गर्नुहुन्छ? तपाईं सल्लाह को लागी सोध्न सक्नुहुन्छ? यो कति समय लाग्छ?
तपाईको पहिलो काम पत्ता लगाउन मुश्किल र तनावपूर्ण हुन सक्छ। तर यो हुनु हुँदैन। तपाईं किशोर, स्नातक वा एक परिपक्व व्यक्ति हुनुहुन्छ जुन तपाईंको पहिलो जागिर खोज्दैछ भन्ने कुराले फरक पार्दैन, संरचित रोजगारीको खोजीले तपाईंको जागिर अवतरणको सम्भावना बढाउँदछ।
तपाईंले आफ्नो पहिलो काम खोज्नु अघि, तपाईंले यी चार सरल नियमहरू सम्झनु आवश्यक पर्दछ।
तपाईंको पहिलो काम खोज टिप # 1 - पनिक नगर्नुहोस्!
गम्भीरतापूर्वक। अधिक तपाइँले तनाव कम कम उत्पादक तपाइँको काम खोजी हुन्छ। सबै भन्दा राम्रो तरिका काम खोज तनावबाट बच्नुहोस् संगठित हुनु हो।
निश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँ:
तपाईको काम खोजीको लागि निश्चित समय सेट गर्नुहोस्।
एक उत्पादक सत्र को लागी एक शान्त, आरामदायक क्षेत्र मा छन्।
तपाईंसँग आवश्यक सबै उपकरणहरू छन् (फोन, स्मार्टफोन, ल्यापटप इन्टरनेट पहुँच आदि)।
एक पेशेवर साक्षात्कार कोच को सेवाहरु को सूचीकृत व्यक्तिगत, टेक्निकल वा विशेषज्ञ सहायता को लागी समाधान हुन सक्छ।
तपाईंको पहिलो काम खोज टिप #2- एक पेशेवर CV / पुनः सुरु गर्नुहोस्
यो तपाईको पहिलो काम खोजी हुन सक्छ, तर एक महान सीभी तपाईले गर्न सक्ने सब भन्दा राम्रो लगानी हो। तपाईंको सीभी / रिजुमे एक प्रचारात्मक कागजात हो जुन हाइलाइट र ईम्प्रेस गर्नका लागि डिजाइन गरिएको हो। एक प्रोफेशनल CV सिर्जना गर्नाले तपाइँले तपाइँको अन्तर्वार्ता वा अनुप्रयोगहरू पाउने सम्भाव्यतालाई उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि गर्नुहुनेछ।
हाम्रो नमूना सीभीहरू तपाइँलाई तपाइँको आफ्नै सीवी सिर्जना गर्न मद्दत गर्न डिजाइन गरिएको हो। यद्यपि एक व्यावसायिक CV सेवा एक उद्योग विशेषज्ञ द्वारा लिखित तपाइँलाई एक निजीकृत, गुणवत्ता सीवी प्रस्ताव गर्न सक्दछ।
तपाईंको पहिलो काम खोज टिप #3- जागिरको अन्तर्वार्ताको लागि तयार गर्नुहोस्
कुनै पनि काम अन्तर्वार्ता महत्वपूर्ण छ। तर यदि यो तपाइँको पहिलो काम अन्तर्वार्ता हो, तब पुरस्कार आश्चर्यजनक हुन सक्छ। त्यसैले यो निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंले हाईयरिंग म्यानेजर, एचआर विभाग वा अन्तर्वार्ताकारलाई काम दिनका लागि विश्वस्त पार्न तपाईंले सक्दो प्रयास गर्नुभयो।
कम्पनीको बारेमा पत्ता लगाउन तपाईंको अनुसन्धान सञ्चालन गर्नुहोस्।
सब भन्दा संशोधित साझा अन्तर्वार्ता प्रश्न तपाईलाई सोधिनेछ।
प्रश्नहरू तयार गर्नुहोस् जुन तपाईं सोध्न सक्नुहुन्छ।
तपाईको अन्तर्वार्ताको लागि उपयुक्त पोशाक।
आफैलाई पर्याप्त यात्राको समय दिनुहोस् र ढिला नपुग्नुहोस्।
तपाईंको पहिलो काम खोज टिप #4- फीडब्याक पाउनुहोस्!
त्यहाँ केवल दुई तरिकाहरू छन् तपाइँको अन्तर्वार्ता प्रविधि सुधार - सिद्धान्त वा अभ्यास। थ्योरी ठीक छ, तर पहिलो-हात अनुभव राम्रो छ।
यहाँ केहि भन्नु पर्छ। दुःखको कुरा, जीवनमा अवरोधहरूको सामना कसरी गर्ने सिक्ने कुरा हामी सबैले सामना गर्नुपर्दछ। तपाईको पहिलो रोजगार खोजीमा अवरोध पनि हुन सक्छ। महत्त्वपूर्ण कुरा यो हो हामी कसरी निराशाको सामना गर्दछौं वा असफलता। याद गर्नुहोस् सबै प्रतिक्रियाहरू खराब छैनन्। तपाईले के गर्नुभयो राम्रो गरी जान्न प्रतिक्रिया दिनुहोस्। समान गरिरहनुहोस्। कहाँ राम्रो काम गर्नुभएन भनेर पत्ता लगाउनुहोस्। ती बुँदाहरूमा सुधार गर्नुहोस्।
हामी आशा गर्दछौं कि तपाईको पहिलो काम खोज लामो समय सम्म चलेन। तपाइँको मद्दतको लागि थप जानकारीको लागि हाम्रो साइट वरिपरि हेर्नुहोस् एक सफल काम खोज आचरण।
पछिल्लोजान्नुहोस् कि तपाईंको शौकहरू र रूचिहरूले तपाईंको बारेमा के भन्छ
अर्कोरोजगार साक्षात्कार तनाव र चिन्ता हटाउने
फ्रान्स मा रोजगार को लागी खोज्नुहोस्
इन्डोनेशियामा रोजगार खोज्नुहोस्
वेबसाइट डिजाइनर के हो र उनीहरू के गर्छन्?
- डा। मार्टिन लुथर कि